नया नौलो Archives - E mechi
यी हुन अमेरिकी ‘भिजिट भिसा’ अस्वीकृत हुने कारण
Posted in नया नौलो
काठमाडौं– अमेरिका जान चाहने नेपालीको संख्या धेरै छ । धेरैले पर्यटकीय भिसा (भिजिट भिसा) मार्फत अमेरिका जाने योजनासहित आवेदन दिएपनि भिसा पाउँदैनन् । अमेरिकी भिसा अधिकारीहरुले आवेदकको अमेरिका जानुपर्ने कारण, उद्देश्य, अमेरिका बसाईमा हुने खर्च, फर्केर आउने विश्वसनीयता, व्यवसायिक प्रयोजन र आर्थिक अवस्थामा विश्वस्त हुन नसके भिजिट भिसा अस्विकृत गरिदिन्छन्। भिसाका लागि अमेरिकी अध्यागमन कानुनले विभिन्न योग्यताहरु राखेको छ। ती योग्यता आवेदकले पुरा नगरेमा भिसा अस्वीकृत हुन्छ। अमेरिकी कन्सुलर अधिकारीहरुले भिजिट भिसाका लागि धेरै आवेदन पर्ने हुँदा निकै छोटो समयमा निर्णय लिन्छन। भिजिट भिसाका आवेदकले निकै छोटो समयमा आफ्नो मनसाय स्पष्ट पार्न नसक्दा भिसा अस्वीकृत हुन्छ। एकपटक भिसा अस्वीकृत हुँदैमा अर्को पटक नपाइने भन्ने होइन। तपाईंको अमेरिका जानुपर्ने स्पष्ट कारण र असल मनसाय भएमा पुनः आवेदन
तौल कम भएर खुशि हुनुहुन्छ ? मक्ख नपर्नुहोस् है कारण गम्भीर हुन सक्छ
काठमाडौं – केही व्यक्ति तौल बढी भएकोमा चिन्ता लिन्छन् । तौल कम भएका कतिपय भने मोटाउने रहर गरिरहेका हुन्छन् । मोटोपन बढ्दै जानु राम्रो होइन । तर, अस्वाभाविक तरिकाले तौल घट्नु पनि विभिन्न रोगको संकेत हुन सक्छ । दुई–तीन दिनमा प्राकृतिक रूपमै चार–पााच किलो तौल घट्नु राम्रो संकेत नभएको बताउाछन् जनरल फिजिसियन प्रा.डा. एई अन्सारी : मोटो व्यक्तिमा मधुमेहको सम्भावना बढी हुन्छ । तर, मधुमेह भइसकेको व्यक्तिको तौल भने घट्ने क्रम सुरु हुन्छ । मधुमेहका बिरामीमा इन्सुलिन कम भएर ग्लुकोज र कार्बोहाइड्रेड पिसाबबाट निस्किन्छ र शरीरमा आवश्यक मात्रा पुग्दैन । ग्लुकोज र कार्बोहाइड्रेड शरीरले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि मानिस दुब्लाउँदै जान्छ । मधुमेहको उपचार गर्नु नै समाधानको पाटो हो । हाइपरथाइरोइडिज्म या थाइरोइड ग्रन्थिमा कुनै रोग लाग्यो भने थाइरोइड हर्मोन अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भोक लाग्ने तथा
मुकेश अम्बानीका छोरा अनन्तले १८ महिनामै कसरी घटाए १०८ किलो तौल ? ताैल घटाउने तरिका पढेर शेयर गर्नुहाेला
एजेन्सी – व्यवसायी तथा एसियाकै धनि मुकेश अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त अम्बानीले १८ महिनामै १०८ किलो तौल घटाएका छन् । सन् १९९५ मा जन्मिएका अनन्तको तौल ५ वर्ष पहिले १७५ किलो थियो । अत्याधिक माटोपनको कारण ट्रोलको सिकार भइरहने अनन्त अम्बानी अहिले २४ वर्षमा मात्रै छन् । अनन्त लामो समयसम्म दमको रोगी थिए । उनले ‘हाइ डोज’ को औषधि सेवन गर्ने गर्थे जसको कारण उनको तौल बढेर १७५ किलो पुगेको थियो । सन् २०१३ मा आईपीएल म्याचमा १८ वर्षका अनन्त मुम्बई इन्डियनको जितमा ट्रफी लिन गएका थिए । जुन तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो । उनले सन् २०१६ मा कडा मेहेनत गरे र १८ महिनामा १०८ किलो तौल घटाए । उनलाई विनोद चन्नाले प्रशिक्षण दिएका थिए । चन्नाले १२ सेसन्सको लागि १.५ लाख फि लिएका थिए । चन्ना अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीदेखि जोन अब्राहमसम्मका फिटनेट प्रशिक्षक हुन् । यसरी कम गरेका थिए तौल –हरेक दिन कार
भनिन्छ नि चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन । बुडापाकाका अनुसार जिवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोख्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । यस्तैमा आज हामी आज तपाईहरुलाई महिलाहरुको ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका कारणहरुका बारेमा जानकारी गराउन गईरहेका छौं । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले अन्ततः कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ । विवाह पछि सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या बिवाह पछि पनि सम्बन्धमा रहन्छन् । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारण
Apr52019 by emechiNo Comments
बिर्सेर पनि खेर नफाल्नुहोस अण्डा उसिनेको पानी छन् अचम्मका फाइदाहरु हेर्नुहोस
अण्डा हाम्रो स्वास्थका लागी आबश्यक खाने कुरा हो ।प्रोटिनले भरिपूर्ण अन्डा स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अचम्म के छ भने अण्डा उसिनेको पानी बोट बिरुवाको लागी पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ ।अण्डा उसिनेपछि रहेको पानी फाल्ने गर्छौ । तर, तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, अण्डा उसिनेपछि उब्रिएको पानी बोटविरुवाका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो पानीले विरुवालाई धेरै फाइदा पुर्याउछ । घर वा अपार्टमेन्टमा राख्नुभएको ‘मनी प्लान्ट’ले सिधा घामको किरण लिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अपार्टमेन्ट वा घरको ‘प्लान्ट’मा अण्डा उमालेर बाँकी रहेको पानी हालिदिएमा बिरुवा चाडै बढ्छ । त्यस्तै यसको पानीले बिरुवाको जरा बलियो बनाउछ ।अण्डा उसिनेको पानीमा अग्र्यानिक क्याल्सियम हुन्छ, जसले विरुवाको जरालाई बलियो बनाउँछ ।जब अण्डा उसिन्छौ, अण्डाले पानीमा मिनरल्स छोड्छ । यो मिनर
Apr12019 by emechiNo Comments
काठमाडौं/ पछिल्लो समय गुमनाम भएकाहरु निकै चर्चामा आइरहेका छन् । गुमनाम भएकाहरु चर्चामा आउने कारण हो सामाजिक संजाल । पछिल्लो समय गुमनाम मानिसहरुलाई पनि सामाजिक संजालले चर्चित बनाइदिने गरेको छ । त्यस्तै एक युवती एउटा फोटोका कारण निकै भाइरल भएकी छन् । भाइरल भएकी यी युवती न कुनै हिरोइन हुन् न कुनै मोडल । उनी सामान्य युवती हुन् । तर उनको सुन्दरताको जादू सामाजिक संजालमा यसरी रातारात भाइरल भएकी छन् । दिल्लीकी यी युवती को नाम केतिका शर्मा हो । उनको जन्म दिल्लीमै २४ डिसेम्बर १९९५ मा भएको हो । पछिल्लो समय केतिको इन्स्टाग्राममा उनको फलोअर संख्या एक्कासी बढेको छ । उनलाई केही मोडलिङ एजेन्सीले पनि अफर दिएको बताइएको छ । हेर्नुहोस् उनका सुन्दर फोटोहरु
यस्ता छन्, सेक्समा चरम यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने १० सूत्रहरु …. अबश्य पढ्नुहोला
काठमाडौं । यौन मानवीय जीवनको अनिवार्य आवश्यकता हो । यौन जीवन जति आनन्दयिक हुन सक्यो मानिसको वैवाहिक जीवन पनि उत्तिकै सुखमय हुन्छ ।तसर्थ, सम्भोगमा संलग्न हुने पुरुष महिला दुवैले यसका बाट चरम सन्तुष्टि लिनका लागि केही कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।सम्भोग समझदारीको विषय पनि हो । यस बेला एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न सके दुवैले उत्तिकै आनन्दअनुभुति गर्न सक्छन् । सम्भोगमा सन्तुष्टि लिने दश सूत्र निम्न अनुसार छन । १‍‍. सम्भोग गर्नुपूर्व नुहाउँनुस्, ब्रस गर्नुस् र सफा कपडा लगाउँनुस् । २. स्त्रिलाई पाकक्रिद्धारा एकदमै उत्तेजित बनाउँनुस् । स्त्रिको मनोविज्ञान ख्याल गर्न सके उसको अधिकारको सम्मान गरेको ठहरिन्छ । यसले दुवैलाई चरमसुख अनुभव गर्न सहयोग गर्छ । ३. सम्भोग गर्नपूर्व गालामा, ओठमा र तिघ्रामा क्रमशः चुम्बन गर्नुहोस् । स्त्रीको कुनै पनि अंगलाई उपेक्षा नगरी छातीमा टाँसिएर प्रेम प
बच्चाले खाना नखाएर हैरान लगाएको छन भने गर्नुस् यस्तो उपाय:हेर्नुहोस
काठमाडौँ । यदि तपाईको घरमा बच्चा छन् भने बच्चाले खाना नखाएर तपाईलाई हैरान त पक्कै बनाएका होलान् । बच्चाले खाना नखाएर तपाई आफै दिक्क हुनुभएको होला । यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई सजिलै खाना खाने बनाउन चाहनुहुन्छ भने बच्चालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । आज हामी तपाईहरुलाई बच्चालाई खाना कसरी कुन समयमा कति समयको फरकमा खुवाउने भन्ने बारे बताउन गइरहेका छौँ । १.हरेक चार घण्टामा एकपटक खानेकुरा खुवाउनुपर्छ । चार घण्टा नपुगी बच्चालाई सानो ठूलो कुनै पनि खानेकुरा खुवाउनुहुँदैन् । खाना खुवाउनुभन्दा दुई घण्टा अगाडी नै पानी खुवाउनुपर्छ । २.खाना खाने समय सिमित तोकिएको हुनुपर्छ । ३.बच्चालाई एक दुइवटा खेल्ने सामाग्री दिएर शान्त स्थानमा राख्नुपर्छ । ४.बच्चालाई खाना खुवाउने व्यक्तिको पनि मुड फ्रेस हुनुपर्छ । ५.बच्चालाई खाना खुवाउँदा सजिलो स्थानमा राखेर खुवाउनुपर्छ । आफै खान सक्ने बच्चा
तपाइलाई थाहा छ ? गाडी चलाउँदा ब्रेक पहिला थिच्ने कि क्लच ? यी चार अवस्था जान्न जरुरी छ
गाडी चलाउँदा प्रायः जसो नयाँ चालकहरूलाई पर्ने समस्या गाडी चलाउँदा गाडी रोक्न ब्रेक पहिला थिच्ने कि क्लच पहिला कन्फ्यिूजन हुन्छ । यो खालको समस्या अनुभवी चालकलाई पनि हुनसक्छ वा भनौँ तपाईंको क्लच र ब्रेक वा गियर प्रयोग गर्ने बानी गलत प्रकारको पनि हुनसक्छ । क्लच र ब्रेक मिलाएर प्रयोग गर्न जानिएन भने यसको असर इन्जिन, गियरबक्स तथा क्लचमा समस्या हुनसक्छ । यसको लागि क्लचको काम के हो पहिला बुझ्न जरुरी हुन्छ । क्लच थिचेपछि इन्जिन र ह्वीलबीचको कनेक्सन छुट्छ, जुन बेला गियर परिवर्तन गर्न सकिन्छ । क्लच र ब्रेकको प्रयोग मिलाएर गर्न जानिएन भने गाडीको स्टार्ट बन्द हुने, झट्का महसूस हुने वा चाहेको ठाउँमा गाडी नरोकिने हुनसक्छ । यसको लागि सबभन्दा पहिला कुनै पनि गियरको सबभन्दा कम गति कति हो अनुमान गर्नुपर्छ । जस्तो १ नम्बर गियरको सबभन्दा कम गति ५ देखि ८ किलोमिटर प्रतिघण्टा हुन्छ भने ५ नम्बर गियरको
Mar252019 by emechiNo Comments
होटलको बेडमा किन बिछ्याइन्छ सेतो तन्ना ?
होटलका कोठा हुन् वा धर्मशाला, तपाइँले देख्नु भएको होला बेडमा सेतो तन्ना नै ओछ्याइएको हुन्छ। तर के तपाइँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ होटलका बेडमा किन सोतो तन्ना नै विछ्याइन्छ? जबकि सोतो रंग नै सबैभन्दा छिटो महिलो हुन्छ। यदि यसका विषयमा थाहा छैन भने आज हामी जानकारी दिँदैछौं। प्रत्येक होटलमा ग्राहक सबैभन्दा पहिला सफाइको माग गर्छन्। सोतो तन्ना सबैभन्दा सफा देखिन्छ। सोतो तन्ना ओछ्याउनुको पहिलो कारण भनेको सफा देखाउनकालागि हो। ग्राहकले कोठाको सफाइ देखेर कोठा बुक गर्छन भन्ने विश्वास गरिन्छ। सेतो तन्नामा केही झर्यो भने दाग बस्छ। यसकारण ग्राहकले खाने पिउने बेलामा पनि निकै ध्यान राख्छन्। सेतो कपडामा ब्लीच सजिलै हुन्छ। ब्लीजले सेतो तन्नामा चमक आउँछ। सेतो रंगले मनलाई शान्त बनाउँछ। सेतो तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निदाउन सकिन्छ। सेतो तन्ना होटलमा यस कारण ओछ्याइन्छ की ग्राहकले रिल्याक्स गर्न सकून्